दुर्घटनामा एयरब्यागले यसरी ज्यान बचाउँछ? (भिडियाेसहित) – Tourism News Portal of Nepal
दुर्घटनामा एयरब्यागले यसरी ज्यान बचाउँछ? (भिडियाेसहित)
नेपालमा सवारी साधन चलाउँदा सुरक्षामा ध्यान नदिनाले धेरैले अकालमै ज्यान गुमाएक छन्।गाडी खरिद गर्दा धेरैले मूल्य, माइलेज र बनोटको कुरामा ध्यान दिए पनि निकै कमले मात्र सुरक्षा (सेफ्टी)को बारेका सुक्ष्म अध्ययन गर्छन्।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा गाडी खरिद गर्नुनै धेरैको लागि एउटा सपना सरह कुरा हो। तर, गाडी खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा ध्यान नदिँदा हामीले धेरै जोखिम मोलिरहेका छौं।
पछिल्लो समय गाडी खरिद गर्न अउने करिa ९९ प्रतिशत ग्राहकले यस्तो सेफ्टी फिर्चसको बारेमा ध्यान दिने गरेको लक्ष्मी हुण्डाइ इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीका सिनियर ब्राण्ड म्यानेजर आवाशिस ओझाले जानकारी दिए।
‘२००६/२००७ तिर ग्राहकहरुले गाडी किन्दा पावर विन्डो, एसी आदि फिचर्सको बारेमा मात्र सोध्थे भने अहिलेका ग्राहकहरु एयर ब्याग, एन्टी–लक ब्रेकिङ सिस्टम (एबिएस) आदिको बारेमा निकै सजक भएका छन्’ ओझाले सेतोपाटीसँग भने।
दुर्घटना भनेको कसैले चाहेर हुँदैन र यो सधै अफ्नो गल्तीले मात्र पनि हुँदैन। त्यसैले दुर्घटना हुनुभन्दा पहिलेनै हामी त्यसको लागि तयार रहनुपर्छ।
एयर ब्याग गाडीको एक महत्वपूर्ण सेफ्टि फिचर हो। पछिल्लो समय अटोमोवाइल कम्पनीहरुले यसमा निकै ध्यान दिइरहेका छन्।
कसरी काम गर्छ त एयर ब्यागले ?
एयर ब्याग कटनले बनेको बेलुन हो जो दुर्घटना हुने वित्तिकै फुल्छ र प्यासेन्जरलाई चोटपटक लाग्नबाट जोगाउँछ।
गाडीको दुर्घटना हुने बित्तिकै अगाडि भएको सेन्सरले प्रति माइक्रो सेकेन्ड प्रेसर काउन्ट गरेर आवस्यक भएको खण्डमा एयर ब्याग निकाल्छ।
सेन्सरको सिग्नल पछि एयर ब्यागमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ जसले गर्दा नाइट्रोजन ग्यास एक सेकेण्डको दश गुणा भन्दा पनि कम समयमा भरिन्छ र प्यासेन्जर त्यो एयर ब्यागमा ठोकिन्छन् र चोट लाग्न पाउँदैन।
प्यासेन्जर जब एयर ब्यागमा ठोकिएर पछाडि धकेलिन्छन् तब तत्काल त्यो एयरब्याग फेरि सुक्छ। यसरी एयर ब्यागले गाडी दुर्घटना पर्दा प्यासेन्जरको टाउको र घाँटी जोगाउन धेरै मद्धत गर्छ।
एयर ब्याग छ भन्दैमा सिटबेल्ट नलगाउने भने होइन। सिट बेल्ट र एयर ब्यागको छुट्टा छुट्टै काम हो।
कसरी भयो यसको सुरूवात?
गाडीमा पहिलोपटक जनरल मोटर्सले सन् १९७० एयर ब्याग प्रयोग गरेका थियो। सन् १९८० पछि यसको ब्यवसायीक रुपमा ब्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ। चालकको सुरक्षाको लागि प्रयोगमा ल्याइएको एयरब्याग प्रभावकारी भएपछि अटोमोवाइल कम्पनीहरुले एउटैमा १० वटासम्म प्रयोग गरेको पाइन्छ। विकसित देशहरुमा अधिकांश साना सवारीसाधनहरुमा एयरब्याग प्रयोग अनिवार्य भए पनि नेपालमा यसको माग र प्रयोग बढ्दो रहेको ब्यवसायीहरु भनाइ छ।साभार सेतेापाटी